काठमाडौं: सामाजिक सञ्जालमा हुने सुरक्षा प्रणाली सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै कम्पनीहरुलाई टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। त्यही भएर पनि आफ्नो ती कम्पनीहरु सुरक्षा प्रणाली दुरुस्त राख्न रातदिन घटिरहेका हुन्छन्। यस्तैमा मेटाले फेसबुक...
काठमाडौँ उपत्यकामा नै मोबाइल फोन सेवा गुणस्तरीय नभएको पाइयो
काठमाडौँ, ५ फागुन -काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै मोबाइल फोन सेवा गुणस्तरीय नभएको पाइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मोबाइल फोनको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मोबाइल सेवा गुणस्तरीय नभएको पाइएको हो ।प्राधिकरणले नेपाल...
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्दा विचार पुर्‍याउनैपर्ने पक्ष
नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट गत जेठ २०७८ मा सूचना प्रविधिको प्रयोगसँगै सिर्जित जोखिम, चुनौती र समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न भन्दै ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०७८’ को मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो...
फेसबुकको शेयरमा ऐतिहासिक गिरावट, के यो मेटा पतनको सुरुआत हो ?
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक शुक्रबार १८ वर्ष पुगेको छ । यसको स्थापना सन् २००४ को फेब्रअुरीमा भएको थियो । कम्पनीको १८ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक यसका प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या घटेको पाइएको फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा...
यस्ता छन् डेटा चोरी गर्न प्रयोग हुने मुख्य प्रकारका साइबर आक्रमण
काठमाडौं । पछिल्लो समय डेटा चोरी वा भनौँ ह्याकिङका समाचार सामान्य जस्तै भइसकेका छन् । हरेक दिन नयाँ नयाँ ह्याकिङ तथा डेटा ब्रिचका समाचार तपाईँ हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ । हालै आइडेन्टिटी थेफ्ट रिसोर्स...
यसरी हेर्नुहोस् तपाईँले अहिलेसम्म पठाएका तर एसेप्ट नभएका फेसबुक फ्रेन्ड रिक्वेस्ट
काठमाडौं । सम्झिनुहोस् त, तपाईँले फेसबुक चलाउन थालेको कति भयो ? अनि तपाईँको ‘फ्रेन्ड लिस्ट’मा कति जना छन् ? यो त तपाईँले सहजै भन्न सक्ने कुरा भयो । फेसबुकमा साथी बन्न कि...
अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्रको आयु सकिँदै, चीनले यही वर्षबाट सञ्चालन गर्दै
काठमाडौँ — अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आईएसएस)को आयु सकिँदै गएपछि नयाँ केन्द्र निर्माणमा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरु यतिबेला होडबाजीमा लागेका छन् । सन् २०३१मा यो केन्द्र पृथ्वीमा खस्दैछ । प्रशान्त महासगरको प्वाइन्ट नेमो क्षेत्रमा अन्तरिक्ष केन्द्र...
ह्वावे बाहेक हार्मोनी ओएस भएको पहिलो फोन सार्वजनिक, डिजाइन आईफोन १३ प्रो जस्तै
काठमाडौं । हार्मोनी ओएस रहेको ह्वावे कम्पनी बाहेकको पहिलो स्मार्टफोन सार्वजनिक भएको छ । यस अघिसम्ममा हार्मोनी ओएस ह्वावेका आफ्नै उत्पादनहरूमा मात्र उपलब्ध हुने गरेको थियो । अब भने ह्वावे बाहेकको फोनमा...
फेसबुक एक निजीरूपमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल हो, जुन फेसबुक निगमको स्वामित्वमा रहेको छ। प्रयोगकर्ताहरूले एक अर्कासँग साथी बन्न र सन्देश पठाउनको लागि यसको प्रयोग गर्ने गर्दछन्। आफ्नो प्रोफाइल अध्यावधिक गरी साथीहरूलाई उनीहरूबारे...
एजेन्सी । दक्षिणको छिमेकी भारतले सन् २०२३ मा मात्रै नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादन हुने १६ हजार मेगावाट विद्युत आफ्नो प्रसारण प्रणालीमा थप्ने भएको छ । अहिले नवीकरणीय ऊर्जाका ५५ हजार मेगावाट जडित क्षमता...